Trump oo qorsheynaya in UN uu ka jaro dhaqaalaha - BBC News Somali
Trump oo qorsheynaya in UN uu ka jaro dhaqaalaha
Safiirka cusub ee Mareykanka u fadhiya Qaramada Midoobey, Nikki Haley, ayaa shalay oo jimco ahayd wacad ku martay in ay muujin doonto awoodda US ee arrimaha caalamka, waxa ayna digniin u dirtay dadka ka soo horjeeda siyaasadaha Trump.
Digniintan ayaa ku soo beegmayso xilli ay jiraan warar sheegaya in Donald Trump uu doonayo in uu saxiixo amar uu hadda diyaaraniyo Aqalka Cad oo lagu dhimi doono balaayiinta doolar ee Mareykanka uu ku bixiyo Qaramada Midoobey.
UNHCR oo ka hadashay colaadda Gaalkacyo
Mareykanka ayaa ah dalka dhaqaalaha ugu badan ku bixiya Qaramada Midoobey, wuxuuna bixiyaa boqolkiiba 22 miisaaniyadda hawlaha Q.M iyo sidoo kale boqolkiiba 28 hawlgalada nabad ilaalinta Q.M oo hadda uu ku baxo dhaqaala gaaraya 7.8 bilyan oo doolar sanad kastaa.
Haddaba arrintan Trump cabsi ma ku haysaa Q.M, su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu Xasan Cali Geele hor dhigay Professor Cabdi Cismaaciil Samatar.
Ban Ki-Moon oo shaqada ka eryay taliyaha ciidamada UNMISS